शौचालयको सास्ती |
प्रकाशित मिति :2015-05-22 13:04:19
कविता थापा /
विनाशकारी महाभूकम्पले घरवार विहिन भई विभिन्न अस्थाई क्याम्पमा बसेका महिलाले भोगेको शौचालयको समस्या अत्यन्तै पिडादायी छ ।
विनाशकारी भुकम्पमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुनेमा महिला धेरै भए जस्तै त्यस पछिको अवस्थामा पनि महिलाले भोग्ने शारीरिक र मनोवैज्ञानिक असर धेरै छन् । हुलमुलमा आफ्नो दैनिकी चलाउदै आएका महिलालाई कपडा फेर्न, सुत्नमात्र होइन सुरक्षित शौचालयको अभावले पनि दिन काट्न मुस्किल छ ।
सबै अस्थायी टहरामा बस्ने प्रत्येक महिलाको समस्या एउटै छ । सुविधा सम्पन्न नभए पनि सफा शौचालय प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना पनि पूरा नहुँदा निकै समस्या पर्ने गरेको छ ।
फोहोर र असुरक्षित शौचालय प्रयोग गर्न जति कठिन छ त्यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । टुँडिखेलको सैनिक मञ्च नजिकै रहेको सौचालयको छेउमा त पुग्न सकिन्न भने यसको प्रयोग कम्ति सकसपूर्ण छैन।
यस्तै शौचालयको समस्या भोग्ने मध्येकी एक हुन– आठ महिनाकी गर्भवती अमृता बर्जाचार्य । पटक पटक शौचालय जानु पर्ने भए पनि त्यहाँको गन्धले गर्दा पिसाब रोकेर बस्न बाध्य भएको उनी बताउछिन् । अन्य समयमा भन्दा गर्भवती अवस्थामा धेरै पानी खान डाक्टरले सुझाव दिए पनि उनले शौचालयको समस्याले पानी नखाई बस्नु परेको छ ।
पछिल्लो एक सातादेखि पिसाब पोल्ने र पिसाब पहेंलो देखिन थालेपछि अमृतामा चिन्ता बढेको छ । फोहोरमात्र होइन बिहानै ६ बजे शौचालयमा हुने लाइन हेर्दा पनि शौचालय जान मन नलाग्ने उहाँले बताछिन् । अमृता भन्छिन्– ‘१५ मिनेट शौचालयको लागि लाइन बस्नु पर्छ, त्यसले पनि शौचालय जानै मन लाग्दैन ।’
गर्भवती मात्र होइन सुत्केरीको समस्या पनि उस्तै छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा बस्दै आएनु भएकी सुजता बस्नेत पनि अरु महिलासरह शौचालयको समस्याले दिक्क छिन् । भूकम्प लगत्तै बैशाख ३१ गते बच्चा जन्माएपछि उनको समस्या झनै बढेको छ । फोहोर र आफू बस्ने क्याम्पभन्दा टाढा रहेको शौचालयले समाधान भन्दा पनि समस्या बढाइ दिएको गुनासो छ सुजाताको । जेनतेन दुःख गरेर खाना जुटाए पनि शौचालयको समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खान मन नलाग्ने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
अस्थायी रुपमा त्यहाँ बसेका महिलालाई मात्र होइन दिउँसो विभिन्न सेवा पु¥याउन त्यहाँ पुग्ने महिलाको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशस्त पानी खानु पर्छ भनेर दिनभर महिलालाई मनोविमर्श दिँदै आएकी पद्मा चन्द शौचालयको समस्याले आफँै पानि नखाई बस्नु हुन्छ । परामर्श दिदा धेरै महिलामा शौचालय र सुरक्षित बसाइको चिन्ता रहेको पद्माको अनुभव छ । दिनमा लगभग १० घण्टा टँुडिखेलमा बसेर परामर्श दिने काममा व्यस्त रहने चन्द शौचालयमा पस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु हुन्छ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मात्र होइन बालिका र अन्य महिलामा पनि शौचालयको समस्या उस्तै छ । सुरुका दुईचार दिनमात्र होइन एक महिना बितिसक्दा पनि शौचालयको समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या ठूलो हुन सक्छ । १२ गते देखिनै टुँडिखेलमा बस्दै आएकी सुनिता कार्की शौचालय प्रयोग गर्ने व्यक्तिको लापर्वाहीका कारण पनि फोहोरको समस्या बढेको बताउछिन् । बिहान १५ मिनेट लाइन बस्नु पर्ने भएकाले पनि शौचालयका कारण बिहानैदेखि तनाव सुरु हुने उहाँ बताउनु हुन्छ । हावा र चर्को घामले गर्दा शौचालय वरिपरी गनाएर दिउँसोमा पनि बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको अनुभव छ ।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. अर्चना अमात्यका अनुसार लामो समयसम्म पिसाब रोक्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ । पिसाबमा संक्रमण मात्र होइन फोहोर शौचालय प्रयोग गर्दा पाठेघरको संक्रमणको पनि समस्या देखिन सक्ने उनले बताइन्। शरिरमा पानीको कमी हुँदा निम्तिने समस्या र फोहोरका कारणले निम्तिने समस्याले गर्दा महिलामा दीर्घकालीन रुपमा विभिन्न खालका समस्या आउन सक्ने भएकाले शौचालयको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार पानी कम खादा जलवियोजन हुने, मृगौला लगायत शरीरका विभिन्न अंगमा पानी कम हुँदै जाँदा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन् । लामो समयसम्म पानी कम हुँदा मृगौलाले काम नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । फोहोर शौचालयको प्रयोगले महिलामा संक्रमणको दर बढ्ने भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
शौचालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा ठूलो क्षति हुने चिकित्सकहरू बताउछन्। त्यसैले शौचालयको समस्यामा हेलचेक्राइ गर्न नहुने डा. श्रेष्ठको सुझाव छ ।
अहिल्यै ठूलो समस्या नदेखिए पनि समयमा व्यस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक र बाह्य रुपमा धेरै स्वास्थ्या समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ । नियमित पोषिलो खानु जति आवश्यक छ शरीरका विकार फाल्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नियमित रुपमा शरीरबाट बाहिर जाने विकार भित्रै रह्यो भने अर्को रोग निम्तिन सक्दछ । सुन्दा शौचालयको समस्या सामान्य जस्तो लागे पनि यसले निम्त्याउने शारीरिक, मानसिक र सामाजिक समस्या जटिल हुने भएकाले अब यसको व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा एउटा समस्या समाधान गर्न नपाउदै अर्को समस्याको थुप्रो बढ्दै जाने छ र त्यसले सधै पिरोलिरहने छ ।